Goorma ayey Socdaallada Yididka bilaabi doonaan? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraGoorma ayey Socdaallada Yididka bilaabi doonaan?
10 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Goorma ayey bilaabanayaan duullimaadyada Yht?
TCDD Tasimacilik wuxuu dhammeystiray koox iyo diyaarin qalab si uu dib ugu bilaabo adeegyadii Tareenka Xawaaraha Sare (YHT), kaas oo loo hakiyey cudurka dillaaca coronavirus; Sugitaanka calaamadda laga sugayo Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha
Sida uu sheegayo warkii Olcay Aydilek ee Habertürk; “TCDD Tasimacilik waxay joojisay duullimaadyadii HAT bishii Maarso kadib markii safarada ku meel gaarka ah la xadiday baaxadda la dagaallanka cudurka faafa ee coronavirus. Gaadiidka TCDD; YHT wuxuu cadeeyay in tigidhada qeexida iyo tareenada gobolka loo celin doono kuwa doonaya isagoon carqalad laheyn, iyo khidmadaha qaybaha aan loo adeegsanin kaararka wax lagu qoro. Waxaa la ogsoon yahay in Marmaray oo ku taal Istanbul iyo tareenka Başkentray ee Ankara ay sii shaqeyn doonaan.
Tallaabooyinka "caadi" ayaa la bilaabay in lagu qaado gudaha jadwal cayiman oo la xiriira dillaaca. Xarumaha wax iibsiga (AVM) ayaa la furi doonaa Isniinta; timo-jarista timo-gooyayaashu waxay bilaabi doonaan inay mar labaad u adeegaan. Shirkadda Diyaaradda Turkish Airlines waxay diyaarisay barnaamij qabyo ah oo dib loogu eegayo duullimaadyada. Sida ku xusan qabyada ah, waxay bilaabi doontaa duulimaadyo gudaha ah bisha June waxayna si tartiib tartiib ah u abaabuli doontaa duulimaadyada caalamiga ah.
Waa sidee xaaladda tareennada iyo basaska is-dhexgalka? Waxaa la sheegay in TCDD Tasimacilik uu diyaar u yahay marka la eego labada koox iyo qalabba si ay u bilaabaan duullimaadyada 'YHT', kuwaas oo si kumeelgaar ah loo joojiyey daacuunka 'coronavirus', marka Wasaaradda Gaadiidka ay siiso calaamad "soo gal". Waqti looma hayo duullimaadyada wali… Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in duulimaadyadu ay bilaaban doonaan bartamaha bisha Juun fasaxa ka dib.
Xitaa haddii "go'aaminta looga baahan yahay" qiimaha tigidhada YHT iyo tareenada kale, ma jiri doonto wax korodh ah. Baaxadda awoodda lagula dagaallamayo cudurka faafa, kala badh awoodda basaska waxaa qaada rakaabka safarka dhexmara. Tallaabooyinka qaar ayaa la filayaa in laga qaado aaggan bisha Juun.
Duulimaadyada YHT ee Konya-Istanbul ayaa bilaabmi doona
Diyaaradaha Konya-Karaman YHT ayaa billaabi doona sanadka soo socda
Bursaray Kestel Suuqyada ayaa bilaabi doona Sannadkan Wadada Ankara Isku Diidi Karo (Video)
Tramway Expeditions to Meelaha Taariikhda (Sawir Sawir)